अशोकसगँ मेरो पुर्वजन्मको साइनो हुनु पर्छ : टकं बुढाथोकी - Eall Nepal
कुरा झापाको हो। केही समय अघि एउटा ७-८ वर्षको बालक सडकमा हिड्छ। आफूलाई मन परेको खान्छ, मन परेको ठाउमा जान्छ। कसैले अनुरोध गरे गीत गाउछ अनि फेरि उसैगरी गीत गाउदै माग्दै , खाँदै सडकमा लावारिस भएर हिड्छ। तर, समय सँधै हुन्न।
झापाबाट काठमाण्डौंमा आइपुग्दा उनको भेट संगितकार टंक बुढाथोकीसंग हुन्छ। टंक बुढाथोकीसंग भेट हुनेअरु कोही नभएर त्यही भाइरल भएका अशोक दर्जी हुन्छन्। उनलाई काठमाण्डौंसम्म ल्याउन स्थानीय मिडियाकर्मी र स्थानीय युवा डिजे रुपकको महत्वुर्ण भूमिका रहेको छ। पारिवारिक विपन्नता र बालकको प्रतिभाले समस्त नेपालीको मन छोयो। यसैले उनीप्रति धेरैको सहानुभूति अनि माया जागेर आयो। यसै क्रममा संगितकार टंक बुढाथोकीले आफ्ना छोराका लागि साँचेर राखेको गित अशोकलाई गाउन दिए।
सार्वजनिक भएको केही समय मै भाइरल हुदै नेपालमा युट्युब संस्करणको ट्रेण्डिङ नम्बर १ मा धेरै दिन रह्यो। यसपछि गायक तथा संगितकार टंक बुढाथोकी र अशोक दर्जीले आफ्नो जीवनमा आमुल परिवर्तन पाएका छन्। सडकबाट उठेका बाल गायक आज आफ्नै कला र गलाले गर्दा झुप्रो घरबाट पक्की घरमा अनि सुकुम्बासीबाट लालपुर्जाधारी परिवार बनाउदै छ। यो अभियानमा रातदिन नभनी गायक तथा संगितकार टंक बुढाथोकीले साथ दिइरहेका छन्। उनको साथ र सहयोगबाट अशोक दर्जीको घरपरिवारको जीवनमा आमुल परिवर्तन भइरहदा टंक बुढाथोकीलाई एउटा गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ।
टंक बुढाथोकीले अशोक दर्जीलाई बनाएको कि आशोक दर्जीले टंक बुढाथोकीलाई? नेपालखबरले उनीमाथि लागेको आरोपबारे बोल्न अनुरोध गर्‍यो। टंक भन्छन्,‘भगवानले बनाएको। न टंक बुढाथोकीले अशोक दर्जीलाई बनाएको हो न त टंक बुढाथोकीलाई नै। म त आफ्नो स्थानमा एउटा परिचय बनाएर बसिसकेको मान्छे। तर, अशोक पनि आफ्नै प्रतिभा र कलाले भएको मान्छे हो। उनको क्षमता र कला नभएको भए आजको स्थानमा रहेर चर्चा कमाउने थिएन। यहा कसैले कसैलाई बनाउदैन। कुरा यति हो यात्रासंगै भएको हो। दुवै कला एकठाउँमा भएको हो।’
प्रस्तुत छ, झापामा अशोक दर्जीको घर निर्माण गरिरहेका टंक बुढाथोकीसंग नेपालखबरका लागि प्रभात लामाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाइँलाई झापाले मोहनी नै लगायो कि क्या हो?
तर, तपाइँ अशोक दर्जीको घर निर्माणका लागि झापा जानु भएको हो नि!
तपाइँ नै निर्माणस्थलमा बस्नु पर्ने कारण के छ र?
घर निर्माणस्थलमा आफै खटिइरहँदा कस्तो महसुस हुन्छ?
अशोक दर्जीको घर निर्माणकार्य कति सकियो?
घर निर्माणको बजेट कति हो?
गीतसंगीत सिर्जना गर्ने मान्छे किन ठेकेदार जस्तो काम गर्न लाग्नु भो?
टंक बुढाथोकीलाई अशोक दर्जीप्रतिको माया किन यती धेरै?
यदि तपाईलाई स्वास्थ रहन मन छ भने यी खानेकुरा भुलेर पनि नखानुहोस
घगर्मी मौसम छ भुलेर पनि नखानुहोस यस्ता खानेकुरा : के खान हुने के खान नहुने थाहा पाउनुहोस